သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိနေပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ • POINT
သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိနေပြီလားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ??? Relationshipတစ်ခုရဲ့အစပိုင်းမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းလားလို့ မေးခွန်းမေးစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်က ပဟေဋိဆန်ဆန်နဲ့ သင့်ချစ်သူက သင့်အကြောင်းကို တွေးနေလားဆိုတာ သင်သိချင်နေပါလိ်မ့်မယ်။ သင်စိတ်ထဲမှာ သင်တကယ်ချစ်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကစားနေတာလားဆိုတာ ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ သင်တကယ်ချစ်မိနေပြီဆိုရင် ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါပြီ။
(၁) အသစ်တစ်ခုခုကို ရုတ်တရပ်လုပ်ချင်နေလား
တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိနေသူတွေဟာ၊ သူတို့လုပ်နေကျ လုပ်ဆောင်ချက်တွေထက် အသစ်တွေကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော် ကြိုက်နှစ်သက်လာအောင်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး ပြေးတာတွေ၊ ငါးဖမ်းတာတွေ ဒါမှမဟုတ် အစားအစာအသစ်တွေ၊ စတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကို ကြိုးပမ်းပြီးရှာဖွေလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိနေသူတွေက ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေရရှိပြီး ရှင်သန်နေနိုင်ပါတယ်။
(၂) အခုလတ်တလော စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိနေသလား
တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိနေတယ်ဆိုတာက စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်းတွေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ မိမိချစ်နေတဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာ မိမိရဲ့ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ စိတ်တထင့်ထင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
(၃) အဲဒီလူနဲ့အတူရှိနေချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေလား
သာမန် Relationship ကနေ အမှန်တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုလျှင် အဲဒီRelationship ဟာပိုပြီး ခိုင်မာစေပါတယ်။ သင်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ထင်တဲ့သူနဲ့အတူရှိနေချိန်မှာ သင်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေမယ်ဆိုလျှင်သင်သူအပေါ်မှာ ချစ်မိနေတာပါပဲ။
(၄) သင်ချစ်တဲ့သူက သင့်ကိုပြန်ချစ်လာမှာလား
သင်ဟာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိနေတယ်လို့ခံစားရရင် အပြန်အလှန်မေတ္တာရှိဖို့ ယောကျာ်းလေးတွေထက်ပိုပြီး မျှော်လင့်ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့တူတဲ့ အရာတွေ ပြန်ရမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။
(၅) သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်ပါသလဲ
Relationship တစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို အမြဲမြှင့်တင်မေးခွန်းထုတ်နေတတ်တဲ့သူတွေက ကြည်နူးဖွယ်တွေကို စတင်ခံစားရတဲ့အခါ စိတ်အားထက်သန်လေ့ရှိပါတယ်။ အကယ်၍စိတ်ပြင်းပြမှုမရှိသေးရင်လည်း မြှားနတ်မောင်ကအလုပ်မလုပ်သေးဘူးလို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။
လူတိုင်းကချစ်မိပုံခြင်းမတူကြပါဘူး။ Relationshipတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ ယခင်ကရှောင်လေ့ရှိသူတွေဟာ အချစ်အပေါ် လေးနက်မှုနည်းသွားလေ့ ရှိပါတယ်။
(၆) သင် မကြာခဏအချစ်ကို ခံစားတွေ့ရှိနေပါသလား
မကြာခဏ ချစ်ခင်တဲ့ခံစားချက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် တကယ့်အချစ်စစ်ကို မလွဲချော်နိင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သာမန်စွဲလမ်းမှုတွေကိုအထင်မှားပြီးစိတ်နှလုံးပူဆွေးရနိင်ချေလည်းများပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ယောကျာ်းတွေဟာ မိန်းမတွေထက် ပိုပြီးမကြာခဏအချစ်ကို တွေ့ရှိနိုင်ကြပါတယ်။
သုတေသနပြုသူတွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ မချစ်မြတ်နိုးခင်မှာ သူတို့လက်တွဲဖော်မှာရှိသင့်တဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး တင်းကျပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သားသမီးအနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေက မြင့်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေက အမျိုးသားတွေအတွက်လည်း ကြိုးစားလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချို့လူတွေဟာ ‘I Love You’ ဆိုတဲ့စကားလေးသုံးလုံးကိုပြောဖို့ တုံ့ဆိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအခြေအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေသာ ထိုစကားလုံးကို အရင်ပြောတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပေမယ့် လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသားတွေကသာအရင်ပြောလေ့ရှိပြီး လူတစ်ယောက်အပေါ် အချစ်ပိုမြန်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
(၈) လူတစ်ယောက်အပေါ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံနေပီလား
ပျော်ရွှင်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့စုံတွဲတွေရဲ့လက္ခဏာရပ်တစ်ခုကတော့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပါပဲ။ အချိန်တွေ၊ စွမ်းအင်တွေ၊ ခံစားချက်တွေပေးနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ကိုခံစားသိရှိတဲ့သူတွေဟာ လူတစ်ယောက်အပေါ်ပေးအပ်မှုတွေ များလာပါတယ်။ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဘဝကိုတိုးတက်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ ကတိတွေပေးလာကြပါတယ်။
Writer & Translator : Cherry & Su Myat
သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိနေပြီလားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ??? Relationshipတစ်ခုရဲ့အစပိုင်းမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းလားလို့ မေးခွန်းမေးစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်က ပဟေဋိဆန်ဆန်နဲ့ သင့်ချစ်သူက သင့်အကြောင်းကို တွေးနေလားဆိုတာ သင်သိချင်နေပါလိ်မ့်မယ်။ သင်စိတ်ထဲမှာ သင်တကယ်ချစ်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကစားနေတာလားဆိုတာ ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ သင်တကယ်ချစ်မိနေပြီဆိုရင် ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါပြီ။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိနေသူတွေဟာ၊ သူတို့လုပ်နေကျ လုပ်ဆောင်ချက်တွေထက် အသစ်တွေကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော် ကြိုက်နှစ်သက်လာအောင်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး ပြေးတာတွေ၊ ငါးဖမ်းတာတွေ ဒါမှမဟုတ် အစားအစာအသစ်တွေ၊ စတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကို ကြိုးပမ်းပြီးရှာဖွေလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိနေသူတွေက ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေရရှိပြီး ရှင်သန်နေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိနေတယ်ဆိုတာက စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်းတွေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ မိမိချစ်နေတဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာ မိမိရဲ့ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ စိတ်တထင့်ထင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
(၄) သင်ချစ်တဲ့သူက သင့်ကိုပြန်ချစ်လာမှာလား
သင်ဟာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိနေတယ်လို့ခံစားရရင် အပြန်အလှန်မေတ္တာရှိဖို့ ယောကျာ်းလေးတွေထက်ပိုပြီး မျှော်လင့်ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့တူတဲ့ အရာတွေ ပြန်ရမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။
(၅) သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်ပါသလဲ
Relationship တစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို အမြဲမြှင့်တင်မေးခွန်းထုတ်နေတတ်တဲ့သူတွေက ကြည်နူးဖွယ်တွေကို စတင်ခံစားရတဲ့အခါ စိတ်အားထက်သန်လေ့ရှိပါတယ်။ အကယ်၍စိတ်ပြင်းပြမှုမရှိသေးရင်လည်း မြှားနတ်မောင်ကအလုပ်မလုပ်သေးဘူးလို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ လူတိုင်းကချစ်မိပုံခြင်းမတူကြပါဘူး။ Relationshipတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ ယခင်ကရှောင်လေ့ရှိသူတွေဟာ အချစ်အပေါ် လေးနက်မှုနည်းသွားလေ့ ရှိပါတယ်။
မကြာခဏ ချစ်ခင်တဲ့ခံစားချက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် တကယ့်အချစ်စစ်ကို မလွဲချော်နိင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သာမန်စွဲလမ်းမှုတွေကိုအထင်မှားပြီးစိတ်နှလုံးပူဆွေးရနိင်ချေလည်းများပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ယောကျာ်းတွေဟာ မိန်းမတွေထက် ပိုပြီးမကြာခဏအချစ်ကို တွေ့ရှိနိုင်ကြပါတယ်။ သုတေသနပြုသူတွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ မချစ်မြတ်နိုးခင်မှာ သူတို့လက်တွဲဖော်မှာရှိသင့်တဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး တင်းကျပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သားသမီးအနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေက မြင့်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေက အမျိုးသားတွေအတွက်လည်း ကြိုးစားလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချို့လူတွေဟာ ‘I Love You’ ဆိုတဲ့စကားလေးသုံးလုံးကိုပြောဖို့ တုံ့ဆိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအခြေအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေသာ ထိုစကားလုံးကို အရင်ပြောတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပေမယ့် လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသားတွေကသာအရင်ပြောလေ့ရှိပြီး လူတစ်ယောက်အပေါ် အချစ်ပိုမြန်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။